Ninja Qoolley Dhexdeenna mod | Hadda waad ku raaxeysan kartaa qaabkan BILAASH
Talaado, May 18, 2021
Inicio/ciyaaraha/Dhexdeena/Mod The Ninja Turtles for Us Us
Mod The Ninja Turtles for Us Us
0 1.249 2 daqiiqo akhri
Ku soo dhowow mar kale Citeia, halkaas oo aad ka heli doonto hababka ugu wanaagsan ee Dhexdeenna iyo ciyaaro kale. Markan waxaan leenahay gaarsiin oo aad runtii jeclaan doontid wax badan, waa nooca Ninja Turtles Mod for Us. Haddii aad taageere u tahay astaamahan astaanta ah, shaki la'aan waxaad u jeclaan doontaa maqaarkan digaagga ninja ee Dhexdeenna ah.
Waqtigan xaadirka ah waxaan heysanaa oo kaliya qaabka loo heli karo PC-ga laakiin la soco qoraaladayada, maadaama daqiiqad kasta aan u heli doonno Android. Waxaan soo sheegnay tan iyo markii aan ognahay inay jiraan dad badan oo jecel noocyada noocaan ah oo leh astaamo caan ah oo ka kala socda telefishanka iyo ciyaaraha fiidiyowga.
Qaabkan waxaa laga heli karaa soo dejin gebi ahaanba bilaash ah isla gelitaankan isla markaana ilbiriqsiyo gudahood waxaad ku raaxeysan kartaa maqaarka ugu wanaagsan ee ninja qoolleyda ah Dhexdeenna. Hadda waxaan kuu sheegi doonaa qaar ka mid ah astaamaha uu qaabkani leeyahay, oo aan hubno inaad wax badan jeclaan doonto.
Hadaad jeceshahay ciyaarta noocan ah waxaan kugula talineynaa mod Flash for Us Us.
Astaamaha cusub ee Ninja Turtles Mod for Us Us
Marka ugu horeysa waxaan dhihi karnaa ugubnimada ugu weyn ee qaabkani keenayaa inay tahay inaad qaadan karto muuqaalka digaagga caanka ah ee ninja. Xaqiiqdii waad xusuusan kartaa Donatello, Raphael, Michelangelo iyo Leonardo. Hagaag hadda qaabkan waxaad ku dooran kartaa mid ka mid ah astaamahan hubkooda iyo midabbada astaamaha leh.
Laakiin haddii aad rabto inaad ku ciyaarto midabada sidoo kale waad sameyn kartaa maaddaama aad beddeli karto midabka mid kasta oo ka mid ah astaamaha. Tan si aad ugu raaxeysan karto kala duwanaansho ballaaran markaad ciyaareyso marka loo eego qaabeynta. Habkaani waa abuuris Aoryu King kaasoo mar hore uga tagay muunad ka mid ah shaqadiisa fiican.
Sida astaamaha kale ee qaabka waxaan dhihi karnaa oo muujin karnaa in waqtiga dilka la sameynayo ay jirto kala duwanaansho ku saabsan animation-ka ciyaarta. Laakiin waa inaad iskaa u raadisaa naftaada si aanad u burburin layaabkaaga, waxaan kaliya kuu sheegi karnaa inaad fiiro gaar ah u leedahay qodobkan Ninja Turtles oo naga mid ah.
Halkee lagala soo bixi karaa qaabka
Haddii aad rabto inaad tijaabiso qaabkan 'The Ninja Turtles Inside Us mod', waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad gasho xiriirka hotfile. Waqtigan xaadirka ah waad soo dejisan kartaa oo aad bilaabi kartaa rakibidda qaabka, haddii aad rabto inaad ogaato sida loo sameeyo waxaan kaa tagi doonaa hage dhammaystiran oo ku saabsan Holymod.
Tani waa mid ka mid ah hababka aan lagu waayi karin ururintaada maaddaama maqaarka qoolleyda ninja ee ay na siiso ay runtii fiican yihiin. Iyo suurtagalnimada in lagu ciyaari karo midabada waa mid aad u xiiso badan ciyaartoyda.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku soo biirto kuweena Beesha khilaaf markaa uma baahnid inaad wax uun naga mid ah. Waxa kale oo aad ka heli kartaa wararka iyo cusbooneysiinta ciyaaraha kale ee maalin walba ifka u soo baxa.
Iskudhafka ugu fiican ee naga mid ah Hababka ugu fiican ee naga mid ah Maqaarka ugu fiican dhexdeenna hargaha ugu fiican dhexdeenna Mod The Ninja Turtles for Us Us mods naga mid ah hababka cusub ee naga mid ah mods dhexdeenna maqaarka ninja qoolley Dhexdayada hargaha
Ku soo dejiso GioWhatsApp aaladaha Android (APK)
Hababka ugufiican ee Minecraft [BILAASH]